Ahoana ny fisafidianana LVT, SPC, WPC - ZD manam-pahaizana zoro
Home > Ahoana ny fisafidianana LVT, SPC, WPC
Ahitsio: Denny　2020-03-20　Mobile
Amin'izao tsenan'ny gorodona izao, ny malaza indrindra dia ny gorodona LVT, ny gorodona SPC, ary ny gorodona WPC.Fantatrao ve ny momba azy ireo? Manaraka, hampahafantatra azy ireo aminao ireo mpanamboatra KINUP!
Andao aloha hiresaka momba ny gorodona LVT, SPC ary WPC?
Raha te hampahafantatra anao ny dikan'ny LVT, SPC, WPC, dia tsy maintsy manomboka amin'ny gorodona PVC ianao. PVC gorodona dia karazana haingon-trano fanaingoana hazavana vaovao tena malaza amin'izao tontolo izao ankehitriny, izay antsoina koa hoe "gorodona maivana". Izy io dia vokatra malaza any Japon, Korea Atsimo any Eropa, Amerika, ary Azia ary be mpitia eran'izao tontolo izao ary be mpampiasa any an-trano, hopitaly, sekoly, trano biraom-panjakana, orinasa, toeram-bahoaka, toeram-pivarotana ary toerana ara-barotra. Ny "gorodona PVC" dia manondro rihana vita amin'ny polyvinyl klorida. Voafaritra manokana, mampiasa polyvinyl chloride sy ny volontazony copolymer ho toy ny akora fototra tena izy, ary manampy fitaovana fanampiana toy ny famenoana, plasticizer, stabilizer, ary colorants, ary mampihatra ny fizotran'ny coating na fandefasana, fanitanana na fanesorana amin'ny takelaka mitovy habe fandraisana amin'ny famokarana.
Ny gorodona antsoina hoe PVC, izay antsoina matetika hoe gorodona plastika dia sokajy marobe izay misy ny gorodona rehetra vita amin'ny polyvinyl klorida dia azo antsoina hoe gorodona PVC.Ny karazana gorodona vaovao toa ny LVT, SPC ary WPC dia tena tafiditra ao amin'ny PVC. Ho an'ny sokajy gorodona dia mampiditra fitaovana hafa hafa ihany koa izy ireo, noho izany dia mamorona sokajy sokajy misaraka izy ireo.
Ny vidin'ny fivarotana varotra LVT amin'ny tsena dia anelanelan'ny am-polony yuan ka hatramin'ny roanjato yuan.Indray andro, dia nampiasaina ho an'ny fitaovana fitaovana izy io, satria mitaky rihana avo sy mitaky mpiasa matihanina hametraka izany, dia ilaina fotsiny ny mandinika ny vidiny. Fametrahana faritra lehibe.
WPC gorodona misy gorodona vita amin'ny plastika misy tsipika matevina, antsoina hoe gorodona vita amin'ny hazo-plastika satria ny tany am-boalohany WPC dia nanampy ny vovony hazo, antsoina hoe gorodona vita amin'ny hazo-plastika. Raha ny fahitana ny fampiononana, ny WPC dia ny rihana PVC akaiky indrindra hatrany amin'ny gorodon-kitay hazo nentin-drazana ary ny sasany amin'ny indostria dia miantso azy io hoe "gorodona volamena", saingy somary avo be ny vidiny, matetika ny RMB 200--400 isaky ny metatra toradroa , Ary tsy azo raisina.
Ny anarana feno ny gorodona SPC dia ny plastika vita amin'ny plastika vato, antsoina hoe gorodona RVP any Eropa sy Etazonia.Miditra gorodona plastika matevina ary mety hiondrika izy io, fa raha ampitahaina amin'ny gorodona LVT dia somary miondrika kely kokoa izy. Tena be mpitia any Eropa sy Etazonia ary Azia Atsimo Atsinanana ... manana ny endri-javatra LVT rehetra sy gorodona WPC, ary manana fikojakoja ny rano sy tantera-tsara indrindra.Mora ny mametraka sy mety amin'ny DIY. Ny vidin'ny fandefasana ny vidin'ny SPC dia avo be.Ny vidin'ny varotra dia mazàna RMB 80-300 isaky ny metatra toradroa. Manana tombony betsaka izy io, toy ny fiarovana ny tontolo iainana; fanoherana ny bibikely sy ny fanoherana ny afo, avo ny afo mirehitra, ny fihenan'ny feo tsara, ny maitso ary ny tontolo iainana, tsy ahitana formaldehyde, metaly mavesatra, benzena ary zavatra manimba. Ny fatiantoka amin'ny SPC dia somary mavesatra ny habeny ary avo ny vidin'ny fitaterana; somary manify ny hateviny, ka misy fepetra takiana amin'ny tany lemaka.
Tao anatin'ny taona vitsivitsy izay, ny indostria LVT, SPC, ary WPC dia namolavola haingana .. Avy amin'ny angon-drakitra fanondranana entana mahazatra sy ireo karazana fivarotana gorodona telo misy an'i Shina dia nanaporofo ny fironana amin'ny fananganana rihana vaovao izy ireo, ary ny gorodona SPC miaraka amin'ny fampisehoana lehibe kokoa. Any amin'ireo firenena mandroso, ny tsipika seramika sy ny gorodona hazo dia nosoloina tsikelikely, ka lasa safidy voalohany amin'ny fanaka vita amin'ny gorodona, koa ny gorodona SPC dia malaza amin'ny olona koa, ary ny fivoarana amin'ny ankapobeny dia lehibe kokoa ihany koa!
Ahoana ny fisafidianana LVT, SPC, WPC Ny atiny mifandraika
1. Aorian'ny fametrahana sy apetraka ny gorodona, ny fikojakojana ny isan'andro dia zava-dehibe indrindra mandritra ny fampiasana maharitra, izay misy fiantraikany mivantana amin'ny fiainana ny seriv...